FeS () + HCl (hydrogen chloride) = FeCl2 (iron(ii) chloride) + H2S (hydrogen sulfide) | Balanced Chemical Reaction Equation
FeS HCl = FeCl2 H2S | Isu dheellitirka Kiimikada
chloride hydrogen = hydrogen sulfide
Kharashka + 2Hcl → FeCl2 + H2S
koloriin koloriin bir (ii) koloriin hydrogen sulfide
(rnn) (dd) (digo yara) (kh)
(ka) (xoog leh) (la soco) (xoog leh)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S
Waa maxay xaalada falcelinta FeS () ay kaga falceliso HCl (hydrogen chloride)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa FeCl2 (iron(ii) chloride) iyo H2S (hydrogen sulfide)?
Dhacdada ka dib FeS () waxay la falgashaa HCl (hydrogen chloride)
In warshadaha, iyagu ma soo saaraan gaaska hydrogen sulphide. Shaybaarada, waxay ku soo saaraan falcelinta maadada chlohydric acid ee leh birta II sulphide.
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta FeS ()
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee FeS ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh FeS () falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee H2S (hydrogen chloride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh H2S (hydrogen sulfide) alaab ahaan?
Falcelinta Kharashka (sắt (II) sulfua) la falgal HCl (axid clohidric) soo saaro FeCl2 (sắt (II) clorua)
Falcelinta soo saarta walaxda FeCl2 (sắt (II) clorua) (birta (ii) chloride)
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 Kharashka + 2HCl → FeCl2 + H2S Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2